Shiinaha Weeton 823A / 828B Laba-qaybood oo PU ah oo soosaarayaasha baako jilicsan oo jilicsan iyo alaab-qeybiyeyaal | Huitiyaan
Weeton 823A / 828B Laba-qaybood oo PU ah oo ku dhegan baakadaha dabacsan
823A / 828B waa koollo PU oo qarash-ku-ool ah, oo aan lahayn dareeraha-bilaashka kaas oo inta badan loo adeegsado dahaadhka u dhexeeya filimka balaastigga ah iyo filimka miisaanka leh, oo si ballaaran loogu dabaqay cuntada, daawada, kiimikada maalinlaha ah, baakadaha warshadaha.
823A / 828B waxay leedahay nafwaaji hoose iyo qoyaan aad u fiican, oo buuxin kara shuruudaha dahaadhka xawaaraha sare leh (450m / min).
Qiyaasta isku dhafka ayaa lagu hagaajin karaa inta udhaxeysa 100: 50-60 iyadoo loo eegayo xaaladaha shaqada gaarka ah.
823A / 828B ma saameynayso furitaanka filimka gudaha ka dib markii la dahaadho. Daaweynta ka dib, xabagta ayaa ah mid hufan, aan dhadhan lahayn, laastik iyo gabow u adkaysta.
Nolol wanaagsan oo dheriga: ka dib marka la isku daro labada qaybood, waqtiga dheriga wuxuu gaari karaa 40 daqiiqo, taas oo muujineysa waxqabadka wanaagsan.
Heerka daaweynta dhakhsaha leh: Xaaladda 35 ℃ ilaa 45 ℃, badeecada si buuxda ayaa loo bogsan karaa ka dib 1-2 maalmood ee dahaadhka. Wixii alaabooyinka baakadaha lagu duubo ee saddex-lakab ah, lakabka saddexaad ee filimka waa in la dahaaraa 12 saacadood ka dib oo laba lakab lakab ah.
Xoog diirka wanaagsan.
OPP / PE, OPP / CPP, Ny / PE, PET / PE, OPP (PET) / VMCPP. (Filimyadu waxay ubaahanyihiin in looxanuunsado daaweynta corona si loo gaaro xiisadda dusha sare.)
Tijaabooyin bilaash ah macaamiisha adduunka oo idil.
* Taageerada farsamada::
Shirkadeena waxay leedahay dhowr farsamo-yaqaanno sare oo ka jawaabi kara dhammaan noocyada su'aalaha habka loo adeegsado alaabada internetka. Isla mar ahaantaana, waxaan bixinnaa xirmo dhammaystiran oo xalka xalka xirmooyinka loogu talagalay macaamiisha. Haddii loo baahdo, shirkadeena ayaa farsamo yaqaanno u direysa goobta ay macaamiisha ku isticmaalaan alaabada si ay ugu xalliyaan dhibaatooyinka macaamiisha.
Badeecadani waxay ku habboon tahay soo saarista cuntada iyo qalabka baakadaha daroogada, iyadoo la raacayo qodobbada ku habboon ee kala ah FDA 175.105 iyo Shiinaha ee GB-9685. Waxyaabaha ku jira xabagta si buuxda loo bogsiiyey waxay waafaqsan yihiin qodobbada ku habboon ee EU 2002/72 / EC iyo qodobka dheeriga ah ee 2004/19 / EC.
Eva Hot dhalaalka xabagta
Filim Koollo dhalaalay ah oo Kulul
Budada Koollada Dhalalka Kulul
Koollo Sealant ah
Weeton 728 Laba-qaybood oo PU ah oo baakad dabacsan ...
8921 waxqabadka sare ee polyurethane